စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၅)
စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၅)
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on May 29, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 18 comments
စုံထောက်အောင်တိုက်နှင့် ကျွန်ုပ်သူရဇော်တို့ ဦးဘလက်ချောရှိရာ အင်းစိန်ထောင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်…
စုံထောက်ကိုအောင်တိုက်မှာ တစ်ညလုံး ဦးဘလက်ချော၏ထွက်ချက်များကို ထောင့်စေ့အောင် အထပ်ထပ်ဖတ်ပြီး လပ်ကီးစထရိုက်ဆေးလိပ်ကိုတစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် ဖွာရှိုက်ရင်းစဉ်းစားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်…
သူရ ။ ။ ဘယ်လိုလဲကိုအောင်တိုက် ခင်ဗျားဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲဆိုတာပါ…
အောင်တိုက် ။ ။ ကျုပ်စဉ်းစားတာတစ်ခုရှိတယ်…ကိုသူရ… ဦးဘလက်ချောလူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျတယ်ထားပါတော့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ဝတုတ်မှာ ဘာတွေများအကျိုးအမြတ်ရှိ သလဲ… နောက်တစ်ခုက နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်သမိန်ဂီကရော ဘယ်လိုများအကျိုးအမြတ်တွေ ရှိနေလို့ ကြောင်ဝတုတ်ကို ပထမပြောထားတဲ့ စာပေပြိုင်ပွဲနဲ့ လက်ရုံးရည်ပြိုင်ပွဲတွေမလုပ်ပဲ ကြောင်ဂိုဏ်းတစ်ခုလုံးကို လွှဲပေးခဲ့သလဲဆိုတာပဲ ကိုသူရရေ…
သူရ ။ ။ ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ ၀င်ပြောချင်တယ်…ကိုအောင်တိုက်…
အခုအမှုကိစ္စကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့လက်ဝဲရံဦးမင်းမတ်က လွတ်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းကို ပြန်ရောက်နေတယ်… အဲဒီလိုပဲ လက်ယာရံဖြစ်တဲ့ ဦးကမ်းဝေးကတော့ အစဆွဲထုတ်လို့မရအောင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်မဟုတ်လား…
အောင်တိုက် ။ ။ အေးဗျ…ကိုသူရ… ခင်ဗျားပြောမှ အဲဒီအချက်ကို ကျွန်တော်သတိ ထားမိတယ်… ကဲဗျာ… ဦးဘလက်ချောရှိရာသွားပြီး ဦးကမ်းဝေးပျောက်ဆုံးနေတဲကိစ္စကို မေးကြည့်ကြတာပေါ့…
ထိုသို့တိုင်ပင်ကြပြီးနောက် ဦးဘလက်ချောရှိရာ အင်းစိန်ထောင်သို့ထွက်လာခဲ့ပါ၏… အင်းစိန်ထောင်သို့ရောက်သောအခါ ထောင်ပိုင်ကြီးမှ ရုံးခန်းတွင်ထုံးစံအတိုင်းနေရာပေးပြီး ဦးဘလက်ချောကို ခေါ်ဆောင်စေပါသည်…
ဦးဘလက်ချော အခန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောအခါ မျက်နှာအနေအထား ကြည်လင်နေပြီး တရားခံများ၏စိုးရွံ့ခြင်းနှင့် ချောက်ခြားခြင်းများကို လုံးဝပေါ်လွင်ခြင်း မရှိသည်ကိုလဲ တွေ့ရသည်…
အောင်တိုက် ။ ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဦးဘလက်ချော…
ဘလက်ချော ။ ။ သေဒဏ်လောက်အထိခံရနိုင်လောက်တဲ့တရားခံတစ်ယောက်အတွက် အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသ၍ နေ့တိုင်းမင်္ဂလာရှိသောနံနက်ခင်းတွေပါပဲ ကိုအောင်တိုက်…
အောင်တိုက် ။ ။ ကဲ..ဦးဘလက်ချောရေ… စေ့စေ့တွေး ရေးရေးပေါ်သလိုပေါ့ဗျာ… မနေ့က ခင်ဗျားရဲ့ထွက်ချက်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုသူရထောက်ပြတော့မှ ဟာကွက်လေးတစ်ကွက်တွေ့လိုက်ရတယ်… အဲဒါကတော့ ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ အားထားရာ လက်ယာရံဖြစ်သူ ဦးကမ်းဝေးကရော…ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်…
ဘလက်ချော ။ ။ ကိုကမ်းဝေးကိစ္စကတော့ ၀မ်းနည်းစရာပေးပဲ… ကြောင်ကြီးရဲ့အပေါင်း အပါတွေက ကျုပ်တို့ကိုဖမ်းထားတဲ့အချိန် ဂိုဏ်းချုပ်နဲ့ ကျုပ်နဲ့က အခန်းတစ်ခန်း… ကိုကမ်းဝေးကိုတော့ဖြင့် မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ တိုက်ပိတ်ခန်းမှာ သပ်သပ်ခွဲထားတယ်…
ကျုပ်တို့အမြင်မှာ စိတ်ဓာတ်နူးညံ့တဲ့ ကိုကမ်းဝေးကိုသီးခြားခွဲထားပြီး အကြမ်းနည်းနဲ့ စစ်ဆေးမယ်လို့ပဲ တွေးလိုက်ရတယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါထက် ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုရော စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သေးလား…
ဘလက်ချော ။ ။ ကျုပ်ကတော့ အစကတည်းက အုပ်စုခေါင်းဆောင်အနေအထား လောက်ပဲရှိသူမို့ စစ်ဆေးမခံရပေမယ့် ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ဝတုတ်ကိုတော့ နှစ်ခါလောက် စစ်ဆေးတာတွေ့ရတယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ခင်ဗျားရှေ့မှာစစ်ဆေးတာလား… တခြားနေရာမှာစစ်ဆေးတာလား…
ဘလက်ချော ။ ။ တခြားနေရာမှာပါ…
အောင်တိုက် ။ ။ စစ်ဆေးခံပြီး ပြန်ရောက်လာတော့ရော ဘာများထူးခြားသေးတုန်း…
ဘလက်ချော ။ ။ ဘာမှထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး… သာမာန်မေးရုံလောက်ပါပဲ…
အောင်တိုက် ။ ။ နှိပ်စက်စစ်ဆေးမှုတွေရောရှိခဲ့သလား….
ဘလက်ချော ။ ။ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ဂိုဏ်းသားတစ်ယောက်မို့ နှိပ်စက်စစ်ဆေးမှုမရှိ ခဲ့ဘူးလို့ ကျုပ်ထင်မိတယ်…ဂိုဏ်းချုပ်ပြန်လာရင်လဲ ပုံမှန်ပါပဲ…
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါဆိုရင် ကိုကမ်းဝေးကိစ္စကို ဆက်ပြောပါဦး… ဦးဘလက်ချော…
ဘလက်ချော ။ ။ ကျုပ်တို့ဆီကို ဦးမင်းမတ်ရောက်လာတဲ့နေ့……
“ ဂိုဏ်းချုပ်ဆောင်ဓားပါတယ်… ဂိုဏ်းချုပ်ကိုယ်စား အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ဖို့ အမိန့်ပေးတယ်…”
လေးစားရင်းအခံရှိသော ဂိုဏ်းဝင်အကျဉ်းစောင့်များက ဦးဘလက်ချောနှင့် ကြောင်ဝတုတ်တို့ အချုပ်ခန်းများကို ဖွင့်ပေးသည်…
“ ကိုမင်းမတ်… ညီလေး… ကမ်းဝေးကိုသွားကြည့်ပါဦးကွာ… မတွေ့တာတော်တော်ကြာလို့ စိတ်ပူနေရတယ်…”
“ ၀မ်းနည်းပါတယ်.. အစ်ကို… ကိုကမ်းဝေး နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ တစ်ပတ်ကျော်သွားပါပြီ….”
မမျှော်လင့်သော စကားကြောင့် ဦးဘလက်ချောခေါင်းငိုက်စိုက်ကြသွားသည်… ကြောင်ဝတုတ်မှာ တည်ကြည်ပြတ်သားသောမျက်နှာဖြင့်…
“ တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ… အထိနာတာရှိမှာပဲ ကိုဘလက်ချော… အများအတွက် တစ်ယောက်ကိုရင်းရတာရှိမှာပဲ… စိတ်ကိုဖြေပါဗျာ…”
“ ကိုကမ်းဝေးကိုမှ လုပ်ရက်လေဗျာ…”
“ နှိပ်စက်ပါတယ်ဆိုမှဗျာ… အားနည်းတဲ့လူကိုရွေးမှာပဲ… ကျုပ်တို့ကိုဖြင့် ဘယ်လုပ်လိမ့်မတုန်း…”
ထိုနေ့က ကိုကမ်းဝေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်…
ထို့နောက် ဦးဘလက်ချောနှင့် ဦးမင်းမတ်တို့ကြောင်ကြီးအားလုပ်ကြံခဲ့ပုံ…
ကြေးမလောက်အား နှူးဘာဂိုဏ်းမှ လက်ရွေးစင်ဖရဲသီးမှ အနီးကပ်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ပြီး ဓားနှစ်လက်အားယူဆောင်လာပုံ…
နှူးဘာဂိုဏ်းသမိန်ဂီမှ နယ်မြေချဲ့ထွက်ခြင်းမပြုတော့ပဲ ကြောင်ဂိုဏ်းပိုင်နက်အား မိမိနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ကြောင်ဝတုတ်မှ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပါစေကြောင်း အမှာပါးလိုက်ပုံ များကို ပြောပြခဲ့သည်…
ထိုသို့ စကားများပြောအပြီးတွင်… ကြောင်လတ်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်ရှာဖွေရန် အတွက် ဦးဘလက်ချောအား ကြောင်ဝတုတ်မှ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါတော့သည်…
အောင်တိုက် ။ ။ အဲဒီလိုနဲ့ ဦးဘလက်ချောက ဂိုဏ်းနဲ့ဝေးရာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ တယ်ဆိုပါတော့….
ဘလက်ချော ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အဓိက ကျုပ်ရှာဖွေရမယ့်လူက ကြောင်လတ်…
ကံဆိုးချင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျုပ်နဲ့ ကိုရင်စည်သူနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးပေါ်မှာ ချိန်းကြတယ်…
အဲဒီနေ့က ထူးထူးခြားခြား ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားပွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်လေတော့ မင်းသမီးဆူးခက်က ရင်ပြင်တော်ပေါ်က စနေထောင့်တန်ဆောင်းမှာ စောင်းတစ်လက်နဲ့ သီချင်းဆိုပြီး ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကို သီကြူးနေတာတွေ့မိတော့မှ…
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါနဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်က တားမြစ်တယ်ဆိုတာကရော…
ဘလက်ချော ။ ။ အဲဒီအကြံကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဂိုဏ်းချုပ်ကို အစီရင်ခံတဲ့အခါ ဂိုဏ်းချုပ်ကတားတယ်… အဓိကအလုပ်ကို မထိခိုက်စေဖို့…
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ကြောင်လတ်ကိုရှာရင်း မင်းသမီးဆူးကို လုပ်ကြံဖို့ ကျုပ်အစီအစဉ် တွေချတာပေါ့…
အဲဒီလိုအချိန်မှာ ဂိုဏ်းချုပ်က ကျုပ်ကိုစိတ်မချလို့ နောက်ကနေပြီး မောင်အာဂနဲ့ မနွယ်ပင်ကို ကျုပ်အကြောင်းစုံစမ်းဖို့ မြန်မာပြည်အတွင်းကို ပြန်ဝင်လာစေတယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်က မောင်အာဂနဲ့ ဦးမင်းမတ်တို့ကနေတစ်ဆင့် ခင်ဗျားကို ခြေရာခံမိတယ်ဆိုပါတော့…
ဘလက်ချော ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ဦးဘလက်ချောကို ကျွန်တော်ခြေရာခံမိရုံတင်မကဘူး… အခုလောလော ဆယ်မှာ ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမရိပ်မိလိုက်တဲ့အမှုတစ်ခုကို ခြေရာတွေ့နေပြီ ဦးဘလက်ချောရာ… ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကျုပ်မေးမယ်ဗျာ… ဦးကမ်းဝေးက အခုချိန်အထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းပဲမဟုတ်လား….
ဘလက်ချော ။ ။ မှန်ပါတယ်…ကိုအောင်တိုက်… ကိုကမ်းဝေးသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းပဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာဖြင့် တစ်ပတ်တောင်မရှိသေးပါဘူးဗျာ…
ကိုကမ်းဝေး နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ တစ်ပတ်ကျော်သွားပါပြီ… တဲ့လား .. တောက်စ်စ်စ် (ဂျူနီယာ ဂရေ ခဏငှားနော် ဟိ) နာတယ်ကွာ ..မ သိလိုက်တာ … ဖဲဝိုင်းလေးတောင် ထောင်ခွင့်မရလိုက်ဘူး … ဟီး ဟီး ငှီးငှီး …
ဒီမယ် ဦးအောင်တိုက် …
ကိုကမ်းဝေးဟာ စံပယ် ဆိုတဲ့ ခေးမလေးတစ်ဦးနဲ့ မေတ္တာမျှနေခဲ့သတဲ့ဗျာ..။
အဲ့သည့်မှာ ဗင်ဂိုးထုံးနှလုံးမူတဲ့ ကိုကမ်းဝေးဟာ
စံပါယ့် အတွက် ဆို သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဆံ ပင် ကိုတောင် ပယ်
ရှားဝံ့တယ် ဆိုပြီး အချစ်ကို သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ကတုံး ရိပ်လိုက်သတဲ့ကွယ်…
ယူနန်မှာ တောင်းပန်မှ ကျေးအေးမယ်ပေါ့နော်…. ခိခိခိ
ကဗျာ ဆရာ ကမ်းဝေး မှာ အသက်ရှိထင်ရှားရှိသော်လည်း ခေး ရဲ့ စွန့်ပစ်တဲ့ ဒဏ်၊ ဂိုဏ်းရဲ့ နှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေ ကြောင့် မခံနိုင်ပဲ ဆံပင်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အော်မေ့ ဂိုဏ်ကြီး ထဲ ၀င်သွားပါကြောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ရရှိပါသည်။
အူးဘလက်ချော သေဒဏ်ပေးခံရမှာဆိုတော့ ၊ သူ့ ပွဲကြရင်တော့ မုန့် ဟင်းခါးလေး လာဆွဲဦးမှဘဲ ။ ဟီဟိ
အောင်မာ ကြောင်ဝတုတ်က တည်ကြည်ပြတ်သားသောမျက်နှာဖြင့်တဲ့ သူ့ကိုယ်သူများ ဟားဟား အူးဘလက်ချောကြီးကိုလဲ မတွေ့ရတာကြာပီဖြစ်သဖြင့် တေ့ချင်အဲလေ တွေ့ချင်မိပါကြောင်း၊ မောင်အာဂတို့နှင့်လဲ ဆုံချင်မိပါကြောင်း၊ ဦးကြီးမိုက်၊ ဦးမက်မင်း၊ ဦးရွှေတိုက်၊ ဦးဖက်တီးကပ်၊ ဦးကမ်းဝေး၊ ဦးအမ်လုလင်၊ ဗိုက်ကလေး၊ ဒေါ်နွယ်ပင်၊ ဒေါ်နှင်းဆီ၊ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နှင့် ဒေါ်အိတုံ အားလုံးအားလုံးနှင့် ဆုံချင်မိပါကြောင်း……… ကြောင်ဝတုတ်ပို့စ်လေးမှ ပြောကြားပါရစေခင်ညာ………
ဇာတ်လမ်း တစ်ခန်းရပ်တုန်း ကြော်ငြာက ၀င်သဟ
ခေတ်နောက်မကျအောင် ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတွေလိုပဲ ဂေဇတ် ဇတ်လမ်းတွဲများမှာ ကြော်ငြာ လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း
အောက်ဆိုဒ်အနေနဲ့ဘီအီးဖိုး ရဒါဘော့နော်..
လကုန်ရင် ကျနော် ထီပေါက်ဖို့ ရှိတယ်
သူငယ်ချင်းစပွန်ဆာပေးခြင်းကြောင့် တွေ့ဆုံရသည်ဖြစ်လျှင် လွန်စွာပင်အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိမည်ဖြစ်ပါသည်…
အော် ကိုကမ်းကြီးရဲ့ ကတုံးကိစ္စနဲ့ စပ်ဆက် သတင်းတွေက အခုမှ သေချာသိရတော့တယ် စိတ်မကောင်းထှာ။ဘဘ ဘလက်လဲ သေဒဏ်ဆိုတော့ မသေမခြင်း သရေကွင်းနဲ့များ ပစ်ကြမလားကွယ်ရို့ ကြက်သီးထလိုက်ထှာ…..ဦးမတ်မင်းလဲ အီဂျစ်မှာ အာရပ်နွေဦးလေးနဲ့ တွေ့လာသလား မသိကွယ်……….။
ဒို့များ ဂိုင်းခြုပ်ဂျီး ကျုပ်ဝတောင် နေကောင်း၊ကျန်းမာပါစေဗျာ………
စကားမစပ် လကုန်ရက်လည်း ရောက်နေပီ ဆိုတော့ကာ အဆိုပြုသူ ထောက်ခံသူတွေ များများလိုအပ် နေသလိုပါဘဲ ဂိုဏ်းတွေ့ဆုံပွဲလေးတော့ဖြင့် လုပ်သင့်ကြောင်း
ကိုကမ်းကြီး တစ်ယောက်တော့ ကိုဖက် နှိပ်စက်လို့ သေသွားရှာပြီတကား ….
ကျွန်တော်သည်က မောင်အာဂပင်ဖြစ်ပါသတည်။ ဂိုဏ်းချုပ်ပေးသော ပိုက်ဆံများ အပြည်ဝမရဘဲ ကြားထဲမှ ဖြတ်အသုံးခံရသောကြောင့် မွဲတေပေ နေပါသဖြင့်။ ပိုင်ရာဆိုင်ရာများဖြင့် သနားသောအားဖြင့်…ထောက်ပံငွေများပေးသနားကြပါရန်တောင်းပန်အပ်သည်။
ဆရာကမ်းကြီး မဂန့် သေးတာကြားရလို့ …
နို့ မို့ ဆို သူ့ ဆီက ဘီအီးအကြွေး ငါးထောင် မရပဲနေမှာဗျ
မင်းသမီး ဆူး မသေသေးဘဲ ပြန်ပေါ်လာမည်။ ;-)
ဟို “ကြောင်ကြီး” ကိုတော့ ပြန်ခေါ်သွင်း မလာနဲ့ အေ။
ကဘချော တို့များ တရာ အပြည့်နဲ့ မို့ ဂုဏ်ယူပါသဗျား။
သို့သော်ငြား ဒီကြားထဲ တော့ အဲဒီ ကြောင်ဝကို တစ်ခုခု ကျွေးမွေးပြုစုလိုက်ဦး။
မဟုတ်ရင် ကြိုးစင် တက်ခိုင်း နေဦးမယ်။
ဗွီဒယို…..ဇဂါးနဲ့ ပြောရရင် သများတို့များ ထွက်သေဂျီးပါလား
ဆိုက်ပါ့စ်..ဘွ ဟင့်ဟင့် …
လက်ဝဲရံလည်း ပျောသေးဒယ်…ဘာ ဒဂိုး အစွမ်းအစမှ
မပျရဘဲ…..အနှိပ်စက်ခံရ..လူမသိ သူမသိ အဖျောင်ခံရဒါဒေါ့
စိတ် ထိ ခ ယက် လိုက် ထှာ အေ…….
အမလေး အမလေး သများဖြင့် မသေသေးဘူး ပြောရက်လိုက်ကျဒါ…
ဗန်ဂိုးလို လိင်အလုပ်သမလေးအတွက် နားရွက်မဖြတ်ရဲလို့
ဒီဂျားထဲ အရက်ဖိုးအကျွေး လာတောင်းဖို့ စောင့်နေဒဲ့လူကချိသေး…
ကျုပ်မသေတာကို ဒင်းက ၀မ်းသာလို့မဟုတ်ဖူးဒဲ့
အရက်ဖိုးငါးထောင် ဆုံးပြီထင်ထားတာ ဒဲ့
နံရိုးကင်တစ်ချောင်းလောက်မှ တန်ဖိုးမထားတဲ့ ပေါက်ဖော်
နင်တို့ မိန်းမတွေ သတိသာထားကြရော…(အင် ဟုတ်ပါဘူး…..)….
ကိုကမ်းဂျီး မသေသေးပါဘဲလား …
ခုမှ ဒီဟာကို ဖတ်မိသဗျို့ …
အပိုင်း (၁၅) တောင် ရောက်ပြီဆိုတော့ …
ရှေ့ကဟာတွေ ပြန်ဖတ်ရဦး ဂိုဏ်းချုပ်ဂျီးရေ …
ကမ်းဂျီးတောင် မသေဘူး ဆိုရင် ဆူးခက် က သေချင်မှ သေမှာပေါ့.. အမှုမှန် ပေါ်စေဖို့ အကွက်ပြီး လိမ်စင်ကြီး လုပ်လိုက်တာ လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။